​मिडल्सबर्जद्वारा हल सिटी पराजित मंसिर २१ – प्रिमियर लिगमा सोमबार राति भएको खेलमा मिडल्सबर्जले हल सिटीलाई १–० गोलले हराएको छ । ग्यास्टन रेमिरेजले प्रिमियर लिगको यो सिजनमा आफ्नो दोस्रो गोल गर्दै मिडल्सबुर्जलाई जिताए ।
​तमिलनाडुकी मुख्य मन्त्री जयललिताको निधन मंसिर २१ – भारत तमिलनाडुकी मुख्य मन्त्री जयललिताको निधन भएको छ । चेन्नईको अपोलो अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सोमबार राति पौने १२ बजे उहाँको निधन भएको जनाएको हो ।
संविधान संशोधन राष्ट्रिय हितमा नरहेको राप्रपाको निष्कर्ष काठमाडौं, मंसिर २० – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकका केही दफा राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेकाले त्यसलाई स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
हवाइ इन्धनको मूल्य घट्यो काठमाडौं, मंसिर २० – नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ । निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको हो ।
पाल्पामा प्रदर्शन, बन्द दुई दिन लम्बियो (फोटो फिचर) देब पचभैया/उज्यालो । पाल्पा, मंसिर २० – पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा सोमबार पाल्पामा जनप्रदर्शनसहित सभा गरिएको छ ।
मुगु खमालेमा आगलागी, एक बालिकाको मृत्यु, ९ घर नष्ट, निभाउन सकिएन मुगु, मंसिर २० – मुगुको खमाले गाविसको वडा नम्बर ९ मा सोमबार दिउँसो आगलागी हुँदा दुई वर्षकी एक बालिकाको ज्यान गएको छ । ९ घर जलेर नष्ट भएका छन् ।
रामकलेवा गरेर रामजानकी विवाहपञ्चमी सम्पन्न (फोटोफिचर) शैलेन्द्र महतो/उज्यालो । जनकपुर, मंसिर २० – रामजानकी विवाहपञ्चमीको अन्तिम दिन सोमबार रामकलेवा गरेर महोत्सव सम्पन्न भएको छ । पौराणिक परम्परा अनुसार रामकलेवामा अयोध्याबाट जन्तीको रुपमा आएका साधुशन्त र पाहुनाहरुलाई मीठा मीठा परिकार खुवाई बिदाई गर्ने गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संसोधन गर्न उक्साएर पछी हट्नु मधेसी मोर्चाको कहाँसम्मको राजनैतिक बेइमानी हो ? यसले त यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन भन्ने प्रमाणित भएन नी हैन र ? अर्काको एजेण्डा बोक्नेसँग कसरी सहमति हुन्छ त ? ​तिलक महतो खै, देश राजनीति मै लागेको छ । राजनीति बाहेक अरू थुप्रै काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरा जिम्मेवारहरूले बिर्सेपछि अरूको के लाग्छ र ? ​शोभा गिरी कार्की नेपालमा सर्वाधिक सफल हुनुपर्ने क्षेत्र विद्युत र आयुर्वेद हो तर बिडम्बना दुबै पछाडि छ, विद्युतको कुरा त आउँछ तर आयुर्वेद किन गुमनाम ? ​सुमन सत्याल
भक्ते कामीले एचआइभी सङक्रमित भएको थाहा पाएर पनि सानु टमाटासँग विवाह गर्नुभएछ । यो खबर सुनेर भक्ते कामीलाई मरो सलाम छ । सरिना लामा देउतालाई रोग र नेतालाई कानुन कहिल्यै नलाग्ने रहेछ । त्यसैले जहाँ जे बोले पनि हुने अनि जे गरे पनि हुने । समस्या समाधान हुन्छ भन्दै दिनहुँ वार्ता मात्रै गर्ने । अखिर वार्तामा के कुरा हुँदो रैछ । त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न र सुन्न पाए हुन्थ्यो । ​दुलाल जी
सबैले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा सङ्घियता र गणतन्त्र आइसियुमा रहेको बिरामी जस्तै भैसक्यो । यो पाराले कसरी पार लाग्ला र खै ? ​तिलक महतो View more
​ओकादीका युवा व्यावसायिक चिज उत्पादन अभियानमा स्याङ्जा, मंसिर २० – भिरकोट नगरपालिका–३ ओकादीका युवा व्यावसायिक रुपमा चिज उत्पादन अभियानमा जुटेका छन् ।
​सोमबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको रियाल, दिर्हामलगायत विदेशी मुद्राको सटही दर काठमाडौं, मंसिर २० – नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ०१ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।
© Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd.- 2016 | Site by: SoftNEP